तत्काल dentures। भुक्तानी दन्त चिकित्सा। दाँत "पुतली"
यी दिन प्रोस्थेटिक्स एक वास्तविक कला भएको छ। संरचना बीचमा विशेष उल्लेखनीय तत्काल कृत्रिम अंग नवीन सामाग्री र प्रविधी प्रयोग गरे। मानिसहरू "पुतली", संलग्न को मूल विधि आवश्यक उत्पादन को दोस्रो नाम जानिन्छ। दन्त उपकरणहरू सुरक्षित मुख मा तय गर्दै छन्, वास्तविक दाँत जस्तो।
तत्काल dentures: नियुक्ति
अनुकूलता नायलन, एक्रिलिक बनेको छन्। प्लास्टिक को छन् clasps फिक्सिंग हो। रोगी जीवन सुविधा कि संरचना स्थापना, यो निम्न कार्यहरू लागि दन्त चिकित्सक द्वारा सिफारिस गरिएको छ।
को चबाने समारोह सुनिश्चित। तत्काल dentures खाने को प्रक्रिया मा बेचैनी को भावना निर्मूल।
दाँत निकासी प्रभावित भएको निको ऊतक को सक्रियता। प्रभावित क्षेत्रमा यांत्रिक चोट, संक्रमण बाट सुरक्षित हुन, अत्यधिक लोड सफाया छ।
सौम्य growths - एक bony exostosis को खतरा रोकन। आफ्नो उपस्थिति हटाउन सकिने prosthetic उपकरणहरू को सबै प्रकार को स्थापना समाप्त।
wherein तिनीहरूले निर्देशन रिमोट तत्व लिन स्वस्थ दाँत, को विस्थापन रोकन। Interdental रिक्त वृद्धि छैन।
सौंदर्यबोध अपील। रोगी स्थायी संरचना को स्थापना को लागि आवश्यक छ कि अवधिमा उनको मुस्कान को सौन्दर्य ख्याल गर्दैन।
कृत्रिम अंग "पुतली": गवाही
अब भुक्तानी दन्त निम्न अवस्थामा अस्थायी संरचना को स्थापना प्रदान गर्दछ।
रोगी पूर्ण माथिल्लो / तल्लो चिबुक मा disposed दाँत हराउछ।
मानिस आरोपण, स्थायी कृत्रिम अंग को स्थापना को लागि तयारी मा समय प्रोस्थेटिक्स आवश्यक छ।
एक / धेरै दाँत हटाउन periodontitis को निदान सहित आवश्यक छ। दन्त कृत्रिम अंग "पुतली" हड्डी को जगेर्ना गर्न योगदान, एक रोगी मा दुखाइ रोक्छ।
माथि दिइएका सबै अवस्थामा, एक डिजाइन, चिकित्सा सुरक्षा र सौंदर्य कार्यहरु incurs। तत्काल dentures, बेरंग आधार छ वस्तुतः मुख मा अप्रभेद्य छन्। प्रयोगको जो उत्पादन पूर्ण सुरक्षित बनाउँछ आधुनिक प्रोस्थेटिक्स सबै आवश्यकताहरु, अनुरूप।
तत्काल dentures को उत्पादन: चरण
अस्थायी हटाउन सकिने संरचना सिर्जना औसत अवधि तीन दिन भन्दा बढि छैन, अधिकांश समय केही घन्टा कम छ। तत्काल-कृत्रिम अंग को उत्पादन निम्न कदम आवश्यक छ comprises।
डाक्टर, नैदानिक अवस्था जाँच्ने इष्टतम उपचार रणनीति निर्धारण गर्छ।
रोगी (हटाउन अघि दाँत) जबड़े को casts लिएको छ।
पुनः प्रिन्ट दन्त टेक्नीसियन गर्न आर्जित। यो पनि आवश्यक उत्पादन रंग मा जानकारी प्रदान गर्दछ।
तत्काल कृत्रिम अंग, दन्त कार्यालय सिर्जना गर्दै निर्माण समय डिजाइन जटिलता निर्धारण गरिन्छ। तैयार उत्पादन दन्त कार्यालय हस्तान्तरण छन्।
आवश्यक छ भने, extractions प्रदर्शन।
देखा दोष dentition निर्मित निर्माण स्थापना गरेर प्रतिस्थापित। सही कमी (यदि यस्तो आवश्यकता छ)।
रोगी अस्थायी कृत्रिम अंग को हेरविचार सम्बन्धित सिफारिसहरू प्राप्त गर्दछ।
कस्ता प्रकारका छन्
प्रोस्थेटिक्स निर्णय गर्नु अघि सबै विरामीहरु, दृश्य रुचि हो, भुक्तानी दन्त चिकित्सा प्रदान गर्दछ जो "पुतली"। तिनीहरूलाई त्यहाँ केवल दुई हो।
पूर्ण dentures। एक स्थायी यन्त्र मौखिक गुहा विकास गर्न आवश्यक छ तपाईं स्थापना गर्नु अघि, विदेशी निकाय यसलाई अनुकूल गर्न। दाँत "पुतली" पूर्ण हराएको दाँत प्रतिस्थापन। यसलाई लगाएका को अवधि व्यक्तिगत एक चिकित्सक द्वारा निर्धारित।
आंशिक dentures। जहाँ रोगी एक तीन दाँत को deprived एक अवस्थामा आवश्यक। यस मामला मा अस्थायी संरचना स्थापना गर्ने dentition गठन स्पेस भरिन्छ। यसलाई पूर्ण "आन्दोलन" स्वस्थ तत्व सफाया।
कृत्रिम अंग "पुतली": स्थापना अवधि
तत्काल dentures तिनीहरूले छोटो अवधि लगाएका छन्, यो अस्थायी संरचना हुन्। यस्तो उपकरणहरू को "जीवन" को औसत अवधि - एक तीन महिना। दक्ष हेरविचार जो रोगी ठीक दन्त चिकित्सक को सबै सिफारिसहरू अनुपालन मा, यो आंकडा वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ।
यो प्रत्यारोपण प्रक्रिया सधैं तीन महिना को रूपरेखा मा फिट छैन। प्रक्रिया ढिला भयो भने, डाक्टर अस्थायी संरचना को नियमित प्रतिस्थापन मा जोर। जसमा उनि परिवर्तन दर उपकरणहरू मा निर्भर गर्दछ। , निर्माण समय पहिलो उत्पादन भन्दा कम तीन दिन हुँदा रूपमा।
कसरी dentures हेरचाह गर्न
हटाउन सकिने उपकरणहरू लागि योग्य हेरविचार लागत (समय र पैसा) उत्पादन प्रतिस्थापन सम्बन्धित कम गर्न, आफ्नो अस्तित्व को अवधि वृद्धि हुनेछ। दन्त चिकित्सक प्रदान गर्दछ विरामीहरु को dentures "पुतली" सेट, आफ्नो सुरक्षाको लागि हेरविचार को आधारभूत नियमहरू यसलाई समर्पित सुनिश्चित।
अस्थायी तय सजिलै हटाउन र चाँडै यसलाई सफा गर्न रोगी अनुमति दिन्छ कि मौखिक गुहा स्थापित गर्न सकिन्छ। खाद्य अवशेष द्वारा सरल टूथब्रश हटाइएका छन्। यो एक दिन प्रक्रिया धेरै पटक दोहोर्याउन उचित छ। यो gingivitis रोक्न, अप्रिय odors को गठन रोक्न, क्षय जोगाउन मदत गर्नेछ। "पुतली" राती हटाउन आवश्यक छ।
मानव आहार, अस्थायी dentures लगाएका पनि ध्यान आवश्यक छ। यो टूटना, हानि डिजाइन गर्न सक्छ कि हार्ड, टाँसिएको खाद्य पदार्थ देखि बहिष्कृत गर्नुपर्छ। सुरक्षित fixation मुख र एक विशेष पेस्ट, डाक्टर सल्लाह हुनेछ जसमा "पुतलीहरु" बढाउँछ।
त्यहाँ कुनै पनि कमियां हुनुहुन्छ?
पनि सबै भन्दा राम्रो dentures सकारात्मक पक्षलाई मात्र अप छन्, त्यहाँ पनि बेफाइदा छन्।
उपकरणहरू को लागत स्थापना को अस्थायी प्रकृति दिइएको, एकदम उच्च छ। एक सेवा जस्तै प्रति दाँत 6000 देखि एक रोगी खर्च हुनेछ।
यो कृत्रिम अंग होल्डरलाई ठ्याक्कै हेरविचार को नियम पालना पनि, लगाउने विषय हो। समय, पैसा - पनि पुनर्स्थापित लागत implies।
स्वच्छता प्रक्रियाहरु एक दिन कम्तिमा दुई पटक प्रदर्शन गर्नुपर्छ। यसलाई फेला नबुझाउन लामो यात्राको र अन्य परिस्थिति मा असहज छ।
आवश्यक dieting। सबै को पहिलो नायलन सिर्जना संरचना स्थापना गर्दा यो महत्त्वपूर्ण छ।
लगाएका दीर्घकालीन को jawbone प्रभावित atrophic प्रक्रियाहरू हुन सक्छ।
अस्थायी आवास को हानि को समय समयमा घटना।
तत्काल dentures - जो मान्छे जीवन आफ्नै गुणस्तर सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, आरोपण लागि तयारी मा प्रतिबन्ध जोगिन प्रभावकारी माध्यम।
Dentures "Acri मुक्त": विवरण, फाइदा र नोकसान, दन्त चिकित्सक समीक्षाएँ
दाँत सीधा: विधि र उपकरण
चाँडै र कुशलतापूर्वक एक दाँतको दुखाइको केले मदत गर्नेछ?
दाँत मा प्लेग। सफाई को विधिहरू
को दुखेको दाँत जरा भने
यस प्रक्रिया र सिफारिसहरू को विवरण आवश्यक कागजात,: रजस्टर देखि अंश प्राप्त
जठरांत्रिय पर्चा को उपचार - भूमिकाबारे dety
Svetlana Shchedrin। जीवनी। Filmography। फोटो
Melani Loran: फ्रान्सेली अभिनेत्री को क्यारियर र व्यक्तिगत जीवन
अन्ना Gorodzhaya: जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
घास ज्वरो: वयस्क र बच्चाहरु मा लक्षण
MSOcache: यसलाई हटाउन सम्भव छ फोल्डरको, र कि भनेर?
गर्भावस्था को समयमा IOM डाक्टर - लागू गर्न सकिन्छ?
चित्रकला "पत्रुस 1": परिवर्तन को महानता
विमान को stabilizer। सामान्य व्यवस्था र हवाइजहाज नियन्त्रणमा
"Triozhinal" - डाक्टर र बिरामीको समीक्षा